Askari katirsan ciidamada Puntland oo lagu dilay qarax miinada dhulka lagu aaso oo ka dhacay buuraha Galgala - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandAskari katirsan ciidamada Puntland oo lagu dilay qarax miinada dhulka lagu aaso oo ka dhacay buuraha Galgala
Garoowe-(Puntland Mirror) Askari katirsan ciidamada Puntland ayaa lagu dilay qarax dhulka lagu aaso oo ka dhacay buuraha Galgala, sida ay sheegeen ilo-wareedyo katirsan haayadaha ammaanka.
Dhacdada ayaa dhacday galabnimadii Axadda, ilo-wareed katirsan dhanka ammaanka, oo magaciisa codsaday in la qariyo, ayaa u sheegay bog wareedka Puntland Mirror.
“Askariga dhintay waxa uu la lugeynayay saaxiibadiis markii miinada dhulka lagu aaso ay ku qaraxday,” ilo-wareedka magaciisa qariyay ayaa sidaa yiri.
Saddex askari oo kale ayaa ku dhaawacantay qaraxa, ilo-wareedka ayaa intaas ku daray.
“Askartii dhaawacu soo gaaray waxa loo qaaday magaalada Boosaaso, mid kamid ah ayaa ku jiray xaalad ba’an.”
Maleeshiyada Al-Shabaab taasoo ka dagaalamaysay buuraha Galgala tan iyo sanadkii 2010 ayaa idaacadeeda Andalus ku sheegatay masuuliyada weerarkaas.
Qaraxa maanta oo Axad ah ayaa imaanaya iyadoo Puntland madaxweyne cusub u dooratay Siciid Cabdullahi Deni, kaasoo balanqaaday in uu gobolka ka sifeyn doono maleeshiyooyinka argagixisada ah.